TSARASAOTRA : Fiara iray nifaoka mpandeha an-tongotra, miisa 02 ireo maty tsy tra-drano
Omaly alakamisy maraina, tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany tany ho any, lozam-piarakodia mahatsiravina no nitranga teny amin’ny lalana mankeny Tsarasaotra lalam-baovao, eto an-drenivohitra. 27 mars 2020
Miisa roa ireo maty tsy tra-drano. Araka ny fanazavana voaray bebe kokoa voaray avy eo anivon’ny Polisim-pirenena dia fiara 405 iray no fantatra fa nandeha nirimorimo mafy ka avy hatrany dia nahavoadona mpandeha an-tongotra, izay vehivavy iray 21 taona sy lehilahy iray 29 taona ireto voafaoka.
Vokatry ny fandonana mafy nahazo azy ireo tamin’io fotoana io dia tsy avotra intsony ny aina fa samy nindaosin’ny fahafatesana teo noho eo ihany ireto farany. Efa voasambotry ny mpitandro filaminana ny mpamily nahavanon-doza tamin’izao tranga izao ka hatolotra ny Fitsarana tsy ho ela aorian’ny famotorana lalina.
Fandehanana mafy diso tafahoatra, mampitandrina hatrany ny Polisy
Manoloana ny trangana lozam-pifamoivoizana miseho eto an-drenivohitra matetika dia tsy mitsahatra mampitandrina ny mpampiasa lalana mandrakariva ny Polisy satria dia saika ny tsy fanajana ny hafainganam-pandeha hatrany no mahatonga faty olona nisesilany. Mandritra izao fotoana tsy mahazo ivezivezena izao noho ny valanaretina coronavirus izao ihany koa dia malalaka sy mangina ny lalana saingy izany akory tsy midika fa mahazo mandeha mafy avokoa ireo mpamily. Ilaina ny fitandremana hisorohana ny loza mahatsiravina efa mateti-piavy.